Fomba fanaraha-maso maivana amin'ny LED Linear
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-08-21
Fomba fanaraha-maso maivana LED tarika LED miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia manan-tsaina, manana fomba fifehezana isan-karazany isika ankehitriny eo amin'ny sehatry ny jiro. Androany izahay dia handray anao hijerena ireo fomba fifehezana manan-tsaina amin'ny jiro. Smart control ho an'ireo mpampiasa efa zatra tra ...
Manam-pahaizana momba ny famokarana Linear Lighting — Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny tranokala ofisialin'i Luxury.
Manomboka amin'ny 9 Aogositra dia afaka mahazo fiaraha-miasa ara-barotra amin'ny hazavana Mahafinaritra ianao amin'ny fitsidihana ny www.luxury-light.com. Niorina tamin'ny 2011 ny rendrarendra, mifantoka amin'ny vahaolana maivana amin'ny fanaka eo an-toerana, jiro tsipika tsy miankina nalamina ho an'ny sehatry ny fampiharana isan-karazany, ary soo ...
Tombony folo amin'ny jiro LED 6-10
Tombony enina, sakany fampiharana marobe Noho ny fahamendrehany, ny chip LED isaky ny singa dia 3 ~ 5mm toradroa na boribory, noho izany dia mety kokoa amin'ny fanomanana fitaovana misy fizotran'ny maodely sarotra. Ohatra, ny fanamboarana fantsona malefaka sy azo averina, fehin-jiro ary jiro miendrika manokana, ...
Tombony folo amin'ny jiro LED1-5
Tombony iray. Ny vatana maivana dia tena kely dia kely ny jiro LED dia kely sy tsara dia tsara LED chip voafono ao anaty epoxy resin mangarahara, noho izany dia tena kely dia kely izy, maivana, afaka mamonjy fitaovana sy toerana be dia be amin'ny famokarana sy ny fampiharana. Tombony roa, fanjifana angovo faran'izay ambany ...
Ahoana ny fomba hisafidianana ny LED Loght
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny fampiharana ny LED eo amin'ny sehatry ny jiro dia nanjary be dia be kokoa, ary ny jiro LED dia nampiditra tsy tapaka ireo vaovao, miaraka amin'ny fomba isan-karazany, ary nanjary tontolo mahafinaritra teo amin'ny fiainantsika. Ka ahoana ny fomba hisafidianana jiro LED mety? Mazava ho azy, ny tsirairay b ...
fantsona firaka alimina alefa taratra jiro
1. Inona ny fantsom-boanjo alimina alim-baravarana alim-by alimina alim-by alim-by alim-by = fantsom-boaloboka aliminioma + fantsom-bokatra LED miorina + herin'ny fiara ivelany. Raha ampitahaina amin'ny jiro manjelanjelatra vita amin'ny LED, ny jiro alimo alimina alim-baravarana tariby dia ankamaroan'ny vokatra enina vita amin'ny vita, whic ...